Fambolena Orkide Phuket " Journey-Assist - Phuket
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Phuket » Toeram-piompiana orkide
Orchid Farm, Phuket
Ny topimaso momba ny toeram-pambolena orkide any Phuket. Vidin-javatra.
Orchid toeram-piompiana amin'ny sarintany. Ahoana no hahatongavana any.
Sary tany an-tsaha orkidra
Hevitra ho an'ny Phuket Orchid Farm (Google reviews)
Hevitra momba ny fiompiana momba ny voly Phuket Orchid (Tripadvisor.com)
Eo amin'ny fidirana dia asiana fehezam-boninkazo kely iray ny tovovavy 🙂
Ary eny! Mahafinaritra tokoa ny gilasy ataon'izy ireo 🙂. 100 baht ny vidiny, fa tena matsiro.
Azonao atao koa ny mividy pod orkide lavanila amin'ity toeram-pambolena ity. 180 baht ny vidiny. Eto ianao dia afaka mividy anana maintso isan-karazany. Maniry eto izy.
Afaka mankany amin'ny toeram-piompiana orkide ianao amin'ny taxi na bisikileta / fiara nohofana. Tsy mandeha eto ny fitateram-bahoaka. Ary raha mitondra ny tenanao ianao dia aza hadino ny mampiasa ny mpitety. Manakona be ny lalana.
Nasaina hitsidika amin'ny fararano izy io. Amin'ity vanim-potoana ity, saika ny zava-drehetra dia afaka mamony ao. 🙂
Orchid Farm (Phuket Orchid Farm) ao amin'ny sarintany
Orkidan'ny toeram-pambolena ao Phuket (Phuket Orchid Farm). Sary sy horonan-tsary
Famerenan'ny Phuket Orchid Farm (famerenana Google)